I-Lyra Luxury studio - eduze nenkaba yedolobha - I-Airbnb
I-Lyra Luxury studio - eduze nenkaba yedolobha
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Jakša
Ngo-203 Mbps, ungashaya izingcingo zevidiyo futhi udlalele lonke iqembu amavidiyo.
U-Jakša Ungumbungazi ovelele
Sawubona lapho! I-Lyra itholakala emgwaqweni omkhulu oholela ngqo eDolobheni Elidala (imizuzu eyi-10-15 uhamba ngezinyawo), cishe noma yini ongayidinga iseduze kakhulu: isitolo sokudla, ikhemisi negalaji likaphethiloli konke kukude ngamamitha angama-30, ibhishi elidumile i-Bačvice iqhele ngamamitha angu-450 kuphela. Sihlinzeka ngesivinini esingu-200 Mbps WiFi / Ethernet LAN esheshayo. Ama-studio e-Lyra aklanywe njengenhlanganisela yesitayela saseMedithera sesimanje nesendabuko, sasebenzisa umbala we-beige ukudala umoya ofudumele, omnandi!
I-Lyra ibekwe esitezi sokuqala (1) ngaphakathi kwesakhiwo sokuhlala, alikho ikheshi, kodwa kusukela esitezi sokuqala akuyona inkinga. Sinikeza isivinini esikhulu sokuxhuma ku-inthanethi, 200 Mbps, WiFi & ethernet/LAN. Ifulethi ligcwele ukukhanya kwelanga elinamafasitela amakhulu ekhishini nasendaweni yokulala! I-Stonewall ehlanganiswe nombani we-LED izodala umoya ofudumele ngenkathi uphumule noma ubuka i-tv. I-TV iku-4k ekulungisweni ngohlelo lokusebenza lwe-Netflix. Isikrini esikhulu esingu-120 cm (amafidi angu-4 diagonal) esinezinhlelo ezingaphezu kuka-1500. I-WiFi nesimo somoya kumahhala.
I-wifi esheshayo – 203 Mbps
Okuhle kakhulu ngalo makhelwane yiqiniso lokuthi ukusuka lapha, wonke amabhishi amakhulu aqhele ngamaminithi ambalwa nje uma uhamba ngezinyawo, i-Bačvice iyibhishi elidume kakhulu, kodwa kukhona namanye, aseduze kakhulu. Amabhange amaningi aqhele ngamamitha angama-200 kanti isibhedlela esikhulu siqhele ngemizuzu embalwa nje ngezinyawo, cishe ngamamitha angama-250.
Noma nini, nganoma yisiphi isizathu, vele ungithumelele umlayezo ku-sms/Whats up, noma ungishayele ucingo ku-0-24, akukephuzi kakhulu noma kusesekuseni kakhulu :)
UJakša Ungumbungazi ovelele